Ii-FAQs - i-Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd.
I-HONGWU NANO ngumenzi waseTshayina wee-nanoparticles ezahlukeneyo ezingaphiliyo. Eyona nto sigxile kuyo kukulinganisa i-nanometer umgubo kunye namasuntswana. Sigcina uluhlu olubanzi lobungakanani bamasuntswana e-10nm ukuya kwi-10um, kwaye sinokuvelisa ubungakanani obongezelelweyo kwimfuno. Iimveliso zethu zahlulwe kathandathu kuthotho lwamakhulu eentlobo: i-elemental, i-alloy, ikhompawundi kunye ne-oxide, uthotho lwekhabhoni kunye nee-nanowires
Kuxhomekeka kwisampulu ye-nanopowder oyifunayo. Ukuba isampulu isesitokhweni kwiphakeji encinci, unokufumana isampulu yasimahla ngokugubungela iindleko zokuhambisa, ngaphandle kweenanopowders ezixabisekileyo, kuyakufuneka uhlawule iindleko zesampulu kunye neendleko zokuhambisa.
Ndingafumana ulwazi loxwebhu?
Ewe, i-COA, i-SEM, i-TEM iyafumaneka.
Ndingasifumana njani isicatshulwa?
Siza kukunika ikhowuti yethu yokhuphiswano emva kokuba sifumene inkcazo ye-nanopowder enjengobungakanani bamasuntswana, ubunyulu; Iinkcukacha zokusasazeka ezinje ngomlinganiselo, isisombululo, ubungakanani bamasuntswana, ubunyulu.
Ndingayihlawula njani iodolo yam?
Iindlela zokuhlawula esizamkelayo: I-Paypal, i-Western Union, i-Bank transfer, i-L / C.
Ngaba unokunceda ngenanopowder eyenziwe?
Ewe sinokukunceda nge-nanopowder eyenziwe ngokukodwa, kodwa siya kufuna i-minmum order quantiy kunye nexesha eliphambili malunga neeveki ezi-1-2.
Ungaqinisekisa njani umgangatho wakho?
Sinenkqubo yokulawula umgangatho kunye neqela lophando elizinikeleyo, sijolise kwi-nanopowders ukusukela ngo-2002, ukufumana udumo ngomgangatho olungileyo, siqinisekile ukuba ii-nanopowders zethu ziya kuhlangabezana neemfuno zakho!
Kuthekani malunga nexesha elichazayo nelokuthumela?
Inkonzo yekhuriya enje nge: DHL, Fedex, TNT, EMS.
Ixesha lokuhambisa (bhekisa kwiFedex)
Iintsuku ezi-3-4 zomsebenzi kumazwe aseMntla Melika
Iintsuku ze-3-4 zeshishini kumazwe aseAsia
Iintsuku ze-3-4 zeshishini kumazwe ase-Oceania
Iintsuku ezi-3-5 zeshishini kumazwe aseYurophu
Iintsuku ezi-4-5 zomsebenzi kumazwe aseMzantsi Melika
Iintsuku ezi-4-5 zomsebenzi kumazwe ase-Afrika